Kullamo ka tirsan koobka Jeneraal Daa’uud oo galabta la ciyaari doono – Gool FM
Kullamo ka tirsan koobka Jeneraal Daa’uud oo galabta la ciyaari doono
jilacow September 18, 2017
(Muqdisho ) 18 Sebt 2017.Koobka Janeraal Daa’uud ayaa furmay Jimcihii aynu soo dhaafnay, iyadoo lagu ciyaarayo garoomada Koonis iyo Jaamacadaha ee ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Koobka Jeneral Daa’uud, waxaa uu ka mid yahay tartamada sanadlayaasha ah ee uu qabto xiriirka Soomaaliyeed ee kubada Cagta, waxaana loogu tala galay in lagu xusuusto Aabihii Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed Jeneral Daa’uud Cabdulle Xersi, oo ahaa aas aasihii xooga dalka Soomaaliya.
Kullamo xiiso badan ayaa galabta dhici doono waxaana is arkaya afar kooxood oo u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Garoonka Koonis waxaa ku wada ciyaari doono kooxaha Waxool iyo Saxafi,halka Jaamacadaha ay isku arki doonaan Savaana iyo Elman.
Kullamada la ciyaarayo ayaa ka tirsan guruubka B, waxaana koox kaste ay dooneysaa in ay guul gaarto.
Kooxda Usbuuca ee Premier League….(Kooxaha Manchester oo min Labo Laacib ku leh)
Dhibka la soo maray shalay iyo Guusha maanta kubadda cagta Soomaaliya ” WARBIXIN